musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Airbus Inotangisa Cloud-Yakavakirwa Pilot Kudzidzisa Service
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • nhau • Kutarisirwa • Technology • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Nhare yeAirbus Yekudzidzisa ruzivo Suite ndeyekunyorera-kwakavakirwa seplatifomu yeplatifomu ine 3D inowirirana chaiyo jekiseni nharaunda yemutyairi inowanzoitika uye yekutanga Type Kudzidziswa.
Airbus yakagadzira MATE ine kutakurika uye kuenderana mupfungwa.
MATe Suite inowanikwa seyakajairika mapakeji ane sarudzo mamodule uye masevhisi anogona kuve akagadziriswa zvinoenderana nezvinodiwa nendege.
Vatyairi vanogona kushandisa sevhisi kudzidzisa chero nguva uye chero kwavanoda.
Airbus yatanga nharembozha yeAirbus Training Training (MATe) Suite, chikuva-chinoshandira-chinoshandira chikuva ine 3D inofambidzana chaiyo nzvimbo yemuchadenga yemutyairi inodzokororwa uye yekutanga Type Kudzidziswa.
Airbus yakagadziridzwa MAT ine kutakurika uye kuenderana mupfungwa. Kuvaka pakubudirira kweAirbus Cockpit Experience (ACE) Yekudzidzisa, chaiyo uye inofambidzana jongwe jekesai simiti inoshandiswa muAirbus nzvimbo dzekudzidzisa dzeFlight Crew Licensing makosi, mhinduro yeMAT inogoneswa kune chero mhando yeIT chishandiso. Vatyairi vanogona saka kushandisa sevhisi kudzidzisa chero nguva uye chero kwavanoda, nevarairidzi vanokwanisa kuongorora nekutevera kufambira mberi kwavo kuburikidza neazvino makore tekinoroji.
Parizvino inowanikwa yeA320 Mhuri, MATe shasha ndege yeAirbus "kugona-kwakavakirwa" uzivi uye Flight Training Reference (AFTR) standard. Mhinduro, iyo inopa akawanda mabhenefiti; kuchengetedza ruzivo kuri nani uye kuchengetedza nguva kwakakosha pamadhigiri epamusoro ekudzidzisa uye simulators, akagamuchirwa nendege, nezvibvumirano zvatosainwa nevatengi vanoverengeka; muEurope - Air Malta - uye nendege huru yevatakuri yeIndia -IndiGo.
MATe Suite inowanikwa seyakajairika mapakeji ane sarudzo mamodule uye masevhisi anogona kuve akagadziriswa zvinoenderana nezvinodiwa nendege. Mhinduro ichave iripo kune ese ari maA330 uye A350 kutanga kwa2022.
Dominican Tourism Kudzoka Kwenhema? Simpson's ...